15 Nsɛm yi akyi no, Absalom ma wɔyɛɛ teaseɛnam maa no, na onyaa apɔnkɔ ne mmarima aduonum a wotu mmirika di n’anim.+ 2 Ná Absalom sɔre anɔpahema+ kogyina ɔkwan a ɛkɔ kurow pon ano+ no nkyɛn, na sɛ ɔbarima biara de n’asɛm reba ɔhene anim ma wabu no atɛn+ a, Absalom frɛ no bisa no sɛ: “Wufi kurow bɛn so?” na ɔno nso ka sɛ: “Israel mmusuakuw no biako mu na w’akoa fi.” 3 Afei Absalom ka kyerɛ no sɛ: “Hwɛ, w’asɛm yɛ dɛ na ɛteɛ, nanso obiara nni ɔhene nkyɛn a obetie w’asɛm ama wo.”+ 4 Na Absalom ka bio sɛ: “O sɛ me na wɔapaw me asase yi so ɔtemmufo+ ɛ, sɛ me na obiara a ɔwɔ asɛm a ɔpɛ sɛ wodi ma no reba m’anim ɛ! Anka atɛntrenee na mebu ama no.”+ 5 Nea na ɔyɛ bio ne sɛ, obi kɔ ne nkyɛn sɛ ɔrekotow no a, ɔteɛ ne nsa so ne mu+ na ofew n’ano. 6 Saa na Absalom yɛɛ Israelfo a wɔbaa ɔhene anim sɛ ommu atɛn mma wɔn no nyinaa. Absalom de saa ara wiaa Israel mmarima koma.+ 7 Ɛbae sɛ mfe aduanan akyi no, Absalom ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Mesrɛ wo, ma menkɔ Hebron+ nkotua me bɔhyɛ ade a mede hyɛɛ Yehowa bɔ no.+ 8 Bere a w’akoa te Gesur+ wɔ Siria no, mehyɛɛ bɔ+ sɛ, ‘Sɛ Yehowa san de me ba Yerusalem a, me nso mɛbɔ afɔre ama Yehowa.’”+ 9 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa asomdwoe kɔ.”+ Enti ɔsɔre kɔɔ Hebron. 10 Afei Absalom somasomaa akwansrafo+ kɔɔ Israel mmusuakuw nyinaa mu sɛ: “Sɛ mote sɛ wɔahyɛn abɛn ara pɛ a, monka sɛ, ‘Absalom abɛyɛ ɔhene+ wɔ Hebron!’”+ 11 Saa bere no, na wɔafrɛfrɛ mmarima ahanu afi Yerusalem adi Absalom akyi kɔ, nanso na wonnim+ nea ɛrekɔ so no ho hwee. 12 Afei nso, bere a Absalom bɔɔ afɔre no, ɔsoma kɔfrɛɛ Giloni+ Ahitofel,+ Dawid fotufo+ no, fii ne kurom Gilo+ bae. Atirisopam+ no mu kɔɔ so yɛɛ den, na nnipa a wɔbɛkaa Absalom ho no dɔɔso ara.+ 13 Akyiri yi, obi bɛka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Israel mmarima koma+ akodi Absalom akyi.” 14 Ntɛm ara na Dawid ka kyerɛɛ ne nkoa a wɔka ne ho wɔ Yerusalem no nyinaa sɛ: “Monsɔre mma yenguan,+ anyɛ saa a, yɛrennya baabi mfa mfi Absalom anim! Monka mo ho, na wanyɛ ntɛm ammɛto yɛn anyɛ yɛn bɔne bi, na wamfa nkrante ammɔ kurow yi!”+ 15 Ɛnna ɔhene nkoa no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Sɛnea me wura ɔhene pɛ nyinaa, hwɛ, wo nkoa ni.”+ 16 Enti ɔhene kɔe, na ne fiefo nyinaa dii n’akyi.+ Ɔhene gyaw mmea du a wɔyɛ ayefam+ sɛ wɔnhwɛ fie hɔ. 17 Ɛnna ɔhene siim kɔe, na ne nkurɔfo nyinaa dii n’akyi. Wokogyinaa Bet-Mehak. 18 Na ne nkoa nyinaa twaam faa ne nkyɛn; Keretifo no nyinaa ne Peletifo+ no nyinaa ne Gatfo+ no nyinaa, mmarima ahansia a wodii n’akyi fi Gat+ bae no, betwaam ɔhene anim. 19 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Gatni Itai+ sɛ: “Dɛn nti na wo nso wo ne yɛn rekɔ? San kɔ,+ na kɔtena ɔhene no nkyɛn, na woyɛ ɔhɔho, na afei nso woatu afi wo man mu. 20 Nnɛra na wobae, na dɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛnnɛ mema wo ne yɛn kokyinkyin+ baabiara a mɛkɔ? San w’akyi kɔ, wo ne wo nuanom. Yehowa ne wo nni no adɔe+ ne nokwaredi+ so!” 21 Nanso Itai buaa ɔhene sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase na me wura ɔhene nso te ase yi,+ baabiara a me wura ɔhene bɛkɔ no, owu mu oo, nkwa mu oo, ɛhɔ ara na w’akoa nso bɛkɔ!”+ 22 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Itai sɛ:+ “Twa kɔ.” Enti Gatni Itai twae, na ne mmarima a wɔka ne ho no nyinaa ne mmofra a wɔka ne ho no nyinaa dii n’akyi. 23 Na asase no sofo nyinaa de nne kɛse sui,+ na nkurɔfo no nyinaa twaam kɔe, na ɔhene gyinaa Kidron subon+ no ho, na nkurɔfo no nyinaa twae kɔfaa sare so kwan no so. 24 Ná Sadok+ ne Lewifo+ a wɔsõ+ nokware Nyankopɔn apam adaka+ no nyinaa ka wɔn ho, na wɔde nokware Nyankopɔn adaka no sii hɔ, Abiatar+ nkyɛn, kosii sɛ nkurɔfo no nyinaa fi kurow no mu twae. 25 Nanso ɔhene ka kyerɛɛ Sadok sɛ: “Fa nokware Nyankopɔn adaka+ no san kɔ kurow+ no mu. Sɛ minya Yehowa anim dom a, ɔbɛsan de me aba na mabehu adaka no ne ne sibea.+ 26 Na sɛ ɔka sɛ, ‘M’ani nnye wo ho’ nso a, mini, nea ɛteɛ wɔ n’ani so biara, ma ɔmfa nyɛ me.”+ 27 Na ɔhene san ka kyerɛɛ ɔsɔfo Sadok sɛ: “Wonyɛ ɔdehwɛfo+ anaa? San kɔ kurow no mu asomdwoe mu, wo ne wo ba Ahimahas ne Abiatar ba Yonatan,+ mo ne mo mma baanu no nyinaa nkɔ. 28 Me de, mɛtwentwɛn me nan ase wɔ sare so asutwaree hɔ akosi sɛ mɛte asɛm bi afi mo nkyɛn.”+ 29 Ɛnna Sadok ne Abiatar de nokware Nyankopɔn adaka no san kɔɔ Yerusalem, na wɔtenaa hɔ twɛnee. 30 Dawid foroo Ngo bepɔw+ no. Ɔreforo kɔ nyinaa na ɔde ade akata ne ti resu; ná ɔnhyɛ mpaboa, na nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa nso, obiara akata ne ti,+ na wɔreforo kɔ nyinaa na wɔresu.+ 31 Na wɔbɛbɔɔ Dawid amanneɛ sɛ: “Ahitofel nso ka wɔn a wɔne Absalom+ apam+ no ho.” Ɛnna Dawid kae sɛ:+ “O Yehowa,+ mesrɛ wo, ma Ahitofel agyinatu nnan nkwaseasɛm!”+ 32 Bere a Dawid duu atifi hɔ, faako a kan na wɔkotow Onyankopɔn no, hwɛ, Arkini+ Husai+ behyiaa no wɔ hɔ a wasuan n’atade mu de dɔte agu n’atifi.+ 33 Nanso Dawid ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wo ne me twa kɔ a, wobɛyɛ adesoa ama me.+ 34 Na sɛ wosan kɔ kurow no mu na woka kyerɛ Absalom sɛ, ‘O ɔhene, meyɛ w’akoa; kan no, na meyɛ wo papa akoa, nanso seesei de, meyɛ w’akoa’+ a, wubetumi asɛe+ Ahitofel agyinatu ama me. 35 Ɛnyɛ wo ne ɔsɔfo Sadok ne ɔsɔfo Abiatar na ɛwɔ hɔ anaa?+ Enti asɛm biara a wobɛte afi ahemfie no, ka kyerɛ ɔsɔfo Sadok ne ɔsɔfo Abiatar.+ 36 Hwɛ! Wɔn mma baanu no ne wɔn wɔ hɔ, Sadok ba Ahimahas+ ne Abiatar ba Yonatan.+ Enti asɛm biara a mobɛte no, momma wɔmmɛka nkyerɛ me.” 37 Ɛnna Dawid yɔnko+ Husai baa kurow no mu. Absalom+ nso baa Yerusalem.